Benzema iyo Ronaldo labada weeraryahan Yurub xiligaan ugu xun iyo taariikhda Real Madrid! | Ciyaarside.com
Benzema iyo Ronaldo labada weeraryahan Yurub xiligaan ugu xun iyo taariikhda Real Madrid!
Cristiano Ronaldo iyo Karim Benzema ceebtooda lama qarin karo madaama ay yihiin labada weerarayahan ee ugu liidato 5-horyaal Yurub ugu caansan iyo labada weeraryahan ee taariikhda Real Madrid ugu bilaabashada xun xili cayaareed cusub.
Xili cayaareedkii hore xiligaan oo kale Ronaldo iyo Benzema waxay wadar ahaan La Ligaha ka dhaliyeen 12-gool ayadoo Ronaldo 8-dhaliyay halka Benzema isagana afar jeer shabaqa soo taabtay.
Balse xili cayaareedkan labo gool ayay wadar ahaan dhaliyeen waxayna ka dhaliyeen naadiga Getafe cayaar Real Madrid 2-1 guusha ku qaadatay.
Marka la fiiriyo 5-horyaal Yurub ugu caansan weeraryahanada iska garab cayaarayaan sida hoose ayay dhalintooda tahay:
Cavani iyo Neymar 22-gool wadar ahaan, Nabil Fekir iyo Mariano 20-gool wadar ahaan Lyon ayay joogaan, Messi iyo Suarez 17-gool wadar ahaan, Lewandowski iyo Muller 14-gool wadar ahaan, Alvaro Morata kaligiis 8-gool, Auguero iyo Gabriel Jesus 16-gool wadar ahaan dhamaan waa kulamada horyaalada.
Waxaaba kaaga sii daran in Ronaldo iyo Benzema labada gool wadar ahaan ay u dhaliyeen xitaa ay kaga goolal yar yihiin Paulinho oo kaligiis 4-gool dhaliyay iyo Marcos Alonso oo kaligiis 3-gool EPL ka dhaliyay kana tirsan Chelsea ahna daafac garabka bidix ka cayaaro!
Taariikh Xumada Real Madrid Kusoo Kordhiyeen Ronaldo Iyo Benzema:
Real Madrid waligeed masoo marin 12-kulan xili cayaareed La Ligaha ugu horeyso labo xidig oo weerarka kaga cayaarayaan kuwaas oo 2-gool.
Hadana waxaa la yaab ah in Ronaldo iyo Benzema yihiin kuwa isku iskoorka wanaagsan madaama xili cayaareedkii 2014/15 La Ligaha 12-kulan ugu horeesay 27-gool ku dhaliyeen wadar ahaan.
Xili cayaareedkii 1942-43 Alonso iyo Botella ayaa 3-gool Real u dhaliyeen 12-kulan ugu horeesay iyo sidoo kale xili cayaareedkii 1984-85 Santillana iyo Butragueno sedex gool ayay dhaliyeen 12-kulan ee ugu horeesay.
Laakiin hada iskoorkii xumaa Ronaldo iyo Benzema ayaa la wareegeen ayagoo horey u heesteen iskoorkii ugu bilaabashada wanaagsanaa Real Madrid dhanka weerarka goolasha.